Tsy ny matihanina SEO rehetra no foronina mitovy. Martech Zone
Zoma Janoary 8, 2010 Alakamisy, Septambra 17, 2015 Douglas Karr
Nandritra ny famintinana, Matetika aho no nifanehatra tamin'ny matihanina SEO izay tia mihaika ny zava-bitika rehetra amin'ny fampiharana. Ny olana dia ireto olona ireto no nampiasaina niasa tamina pejy maromaro niaraka tamin'ny teny lakile vitsivitsy ary avy eo nampitombo ny vokatr'ireo pejy voafantina ireo. Tsy zatra nampiasa lampihazo izy ireo ahafahan'izy ireo mikendry teny an-jatony ary manoratra votoaty tsara tsy manam-petra hananganana valiny.
Tsy ny matihanina SEO rehetra no foronina mitovy. Hanasokajy ny tenako ho SEO jack amin'ny varotra rehetra. Soa ihany, nanodidina ny tenako niaraka tamin'ireo matihanina SEO hafa aho izay niasa tamina fanamby isan-karazany ho an'ny mpanjifa. Mianatra tsy tapaka amin'izy ireo aho.
Tsy mandondona manam-pahaizana manokana momba ny SEO aho - saingy misy ny fanamby atrehin'ireo mpanjifa maro izay mila fahaizana manokana:
mifaninana - Ireo tranokala ireo matetika dia tranokala avo lenta ary mandany vola be amin'ny atiny sy serivisy hanohanana ny backlinks mahery amin'ny tranokala ary hanatsara ny pejy tsirairay amin'ny teknika fanatsarana rehetra mety.
Local - Ny fanamafisana ny tranokalanao amin'ny SEO eo an-toerana dia mitaky teknika samihafa, mampiditra ny teny isam-paritra, ary manangana rohy mifandraika amin'izany. Ny atiny dia tokony ho kendrena mafy mandritra ny fotoana rehetra!
malalaka - Ny fananganana sy ny fanatsarana ny tranokalanao amin'ny teny fanalahidy marobe, indraindray an'arivony, dia afaka mandray rafitra tranokala tokana mba hampitomboana ny fiantraikan'ny atiny ao amin'ilay tranonkala.
Blogs - Biby hafa ny bilaogy noho ny manatsara ny tranokala. Ireo teknika nampiasaina tamin'ny famoahana sy fandefasana atiny, fanoratana kopia mahasarika hisarihana ny saina, ary hampidirina ny lakilen'ny media sosialy. Ny fananganana eo amin'ny lampihazo izay mampiasa fitaovana feno toy ny pinging, sitemaps, data meta, ary lohahevitra novaina be dia fototra tsy maintsy ampidirinao. Tsy voafehin'ny isan'ny pejy ihany koa ianao.
vaovao - ny fanindriana sehatra vaovao tsy misy fahefana dia mitaky paikady tena hafa noho ny miasa amin'ny tranokala iray izay efa manana tanjaka iray taonina ary milahatra tsara.
Ireo tranonkala bitika sy pejy fitodiana - Ny fananganana tranokala malina misy pejy iray na roa hahatratrarana fifamoivoizana tena manokana miaraka amin'ny atiny tsy mitombina dia mitaky fifehezana tena henjana amin'ny fizarana teny lakile sy ny fananganana pejy.
Fahefana avo - ny matihanina SEO sasany izay mbola tsy niara-niasa tamin'ny sehatra efa niorina tamina laharana lehibe dia mitaky risika tsy ilaina. Ny bandy SEO sasany dia tia milely sy manamboatra mandra-pandikan'izy ireo izay mandeha. Tsy tsara rehefa manana firaketana azo antoka ianao. Indraindray ny fikolokoloana dia mety maharitra amam-bolana hiakarana.
Amin'ny fotoana katroka - tranonkala teknolojia sy olo-malaza maro no mitaky fahalalana momba ny fomba hananganana lohahevitra nalaza ary hamadika azy io ho fifamoivoizana an-taonina ao anatin'ny minitra na ora maro amin'ny fampiasana SEO amin'ny fomba mahomby. Mahagaga ry zalahy ireo… Mahaliana foana ny mahita hoe iza no manana laharana # 1 rehefa mihena ny vaovao.
toeram-piompiana - atiny fiompiana manomboka mihena satria ny vidin'ny habaka sy bandwidth dia nihena be. Raha afaka mametraka tranokala mahomby aho izay manampy lahatsoratra 500 isan'andro ary mahazo ireo index ireo pejy, afaka mandefa doka amin'izy ireo aho ary mahazo tombony be. Indrindra raha mikendry ireo pejy amin'ny teny lakile aho izay mitondra zotram-pisidinana avo lenta sy habetsahan'ny fikarohana.
Rehefa miantsena ho an'ny matihanina SEO manaraka ianao, tandremo ny haben'ny mpanjifa niara-niasa taminy, ny paikady tokony hapetrany, ary indrindra ny vokatra azony tratrarina. Toa izao ny masoivoho rehetra any dia manisy SEO amin'ny lisitry ny serivisy… mitandrema.
Mangataha fanovozan-kevitra, tadiavo ireo manam-pahaizana an-tserasera mba hahitana raha izy ireo raha ny marina laharana, ary aza gaga rehefa miverina manerana ny sari-tany ny teny nalaina. Ny fanampiana SEO lehibe dia mendrika ny fampiasam-bola ary mety handany vola be. Ny SEO mahantra dia vola very fotsiny.
Tags: fambolena anatyseo eo an-toerananew domainlaharana amin'ny teny lakileamin'ny fotoana katrokafahefana mitadySEOfifaninanana seoseo consultantseo matihanina
Jan 8, 2010 ao amin'ny 7: 48 AM
Nisy fotoana iray izay "Jack of all Trades" amin'ny fanjakany dia zavatra tsara. Tsy misy rantsantanana manondro ny antony tsy niasan'ny asanao noho ny zavatra tokony hataon'ny olon-kafa. Mbola mieritreritra an'izany aho ary matetika dia nantsoina hoe jeneraly ary afaka an'izany aho. Manova ny heviny matetika izy ireo rehefa mampiasa ny serivisiko ;-).
Noraisina tsara ny hevitrao ary antenaiko ireo izay mitady "manam-pahaizana" SEO, toy ny manam-pahaizana hafa tadiavinao, hahatakatra ireo teboka nolazainao etsy ambony hahafahany manamarina sy manamarina ny haavon'ny "manam-pahaizana" ilainy na tadiavin'izy ireo.
Tratry ny taona vaovao ary mitazona ny atiny mahafinaritra ho tonga! Ankafiziko ny mari-pamantarana ny tabataba 😉